Ny androaniko | Novambra 2016
[Aingam-panahy ] 29 Novambra, 2016 20:47
Aleo aho hipetraka.
Valin-kafatra ho an'i Zaz...
ALEO AHO HIPETRAKA
Ny andro sy ny volana
Hain'andro sy ny orana
Aleo tsy hotsarovana
Ilay izaho nifaliavanja
Aleo tsy omena lanja
Ny nofy notefeko
Ny tongotro an-katoka
Handositra ny kapoka
Ny saiko efa reraka
K'aleo aho hipetraka
Dia aza asiana resaka
[ikalamako, nov. 2016]
[Lasalasa fisainana ] 23 Novambra, 2016 09:02
Mba nandefa fisainana indray (01/2008) - UPDATED (11/2016)
Ity lahatsoratro 8 taona lasa ity indray no tsaroako raha nahita ity sary ity aho omaly ka aleo atambatro ato : ny feeling tao an-tranon'omby raha alaina sary an-tsaina hoe miaina izao vaninandron'ny teknolojia izao.
18 JANOARY 2008
OUF vita ny fety, milamina sy voadio ny trano (tato ihany no nariana ny fako fa tsy lasa any Naples kah !).
Dia nakanaka aina nandinika ny fety nifanesy teo moa, dia niverina kely tany amin'ny Noely indray ny saina, dia tonga indray ny fanontaniana hoe :
Inona angaha no mety nitranga raha toa ka vehivavy ireo Majy telo nanatitra fanomezana ho an’i Jesoa zazakely ?
Nanontany làlana izy ireo.
Tonga ara-potoana izy ireo.
Nanampy nampiteraka an’i Maria izy ireo.
Nanadio ny tranon’omby izy ireo.
Fanomezana tena ilaina no natolotr’izy ireo.
Sy zavatra azo hohanina.
Fa mba inona kosa angaha ny resaka mety ho re teny an-dalàna raha nody izy ireo ?
mety hoe :
Kay, mba hitanareo ve ilay kapa nanaovan’i Maria niaraka tamin’ilay akanjolavany ?
Ary ilay zaza tena tsy mitovy amin’i Zozefa mihitsy e !
Fa mba ataon-drizareo ahoana koa angaha ny mipetraka miaraka amin’ireo biby ireo anatin’io trano io ?!
Ka ny ampondrany aza mahia kaozatra ohatran'ny inona koh !
Ary Zozefa ange hono toa tsy miasa akory e ! Toa saomera hoe...
Enga anie fotsiny ka averiny ny vilany nitondrantsika vary sy laoka teo e !
Virjiny hono Maria ! ntss, virjiny ny any ankaratra, olona niaraka tamiko teny Ankatso iny, fantatro tsara mihitsy !!!
Asa re !
[ (17) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
[Lalao ] 18 Novambra, 2016 10:28
Mangataka fa tsy mividy vato
Isika rehetra namana mba sendra mahita ity lahatsoratra ity alohan'ny 4 desambra dia iangaviana an-tànan-droa mba hanindry ny bokotra "Votare la foto" ato amin'ito takelaka ito : IL MESSAGGERO, fa mba mitsabo vintana ikalamako manapariaka ny pikapika sariny tetsy sy teroa. Mba ampiasao daholo moa ny solosaina sy ny finday rehetra hitanareo mipetrapetraka eny fa mitoko daholo manko ireny e.
"Roma eny an-kianja" no lohahevitra dia samy mba mampiseho ireo kianja eto Roma ny mpifaninana, na kianja malaza na tsy be mpitsidika na tena tsisy mpahalala, ka ny ahy io eo anoloan'ny toby iray an'ny polisim-bohitra io no miakatra an-tsehatra mifaninana. Ireo roambinifolo mahazo ny voalohany dia hatao amin'ny alimanaka 2017 an'ilay gazety "Il Messaggero" mampanao ny lalao.
Indray mandeha isan'andro dia afaka mandatsa-bato raha sendra mandalo o ! Misaotra indrindra.
[Ankapobeny ] 12 Novambra, 2016 23:01
...tiako kosa ity an...
(ikalamako sy angie boutax tanaty fiarandalamby - pika sarin'i sefo hery)
[Fanajana ] 11 Novambra, 2016 10:05
Nefa hoy izy hoe tsy tokony toa izao no ifanaovana veloma.
"[...] Saingy ankehitriny toa manomboka misy elanelana
Nefa samy mila manao ezaka isika roa
Ny masonao mihamalefaky ny alahelo
Hey, tsy tokony toa izao no ifanaovana veloma [...]"
...dia lasa koa i Leonard Cohen : Tongava soa any amin'ilay tontolo tsy hita maso !
Ary asa re fa nandritra ny herinandro anefa izao dia ity hirany ity no tsy afaka tam-bavako.